၂၀၂၂ ခုနှစ်ထဲ စစ်ရေးရလဒ် ထွက်ပါ့မလား – Min Thayt
စိုးရိမ်စရာတွေ ရေးမိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
၁။ မြေပြင်အခြေအနေတွေအရ အထိနာမှုတွေများလာရင်၊ အချင်းချင်း ပြစ်တင်တာ၊ ဆဲဆိုတာ၊ စိတ်ပျက်တာတွေ ရှိလာတတ် ကြပါတယ်။ အဲသည့်အထဲမှာ အဆိုးဆုံးကတော့ တရားခံရှာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကြောင့်၊ ဘယ်ဝါ့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ အချင်းချင်း ပြစ်တင်မောင်းမဲတာတွေ များလာတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အတွင်းစည်းထဲက ယုံကြည်မှုအချင်းဝက်ကို ပိုပြီး တိုအောင် ဖြတ်တောက်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေဟာ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် ဝါဒဖြန့်ချိရေးနဲ့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးကို သုံးတတ်တယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ ဝါဒဖြန့်ချိလေ့ရှိပြီး၊ စစ်ဗိုလ် တွေကတော့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးဆိုပြီး ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်း ဝါဒဖြန့်ဖို့ ကြိုးစားသလို၊ စစ်ဗိုလ်တွေ ကလည်း စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ စည်းလုံးအောင် လုပ်တတ်ကြတယ်။ ဒါတွေဟာ ထိုက်သင့်သလောက် အရာရောက်တယ်ဆို ပေမယ့်၊ ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုကိုတော့ မတည်ဆောက်နိုင်ဘူး။ တချိန်ကျတော့ ပြိုပျက်တာပဲ။
၂။ လက်ရှိ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ဝါဒဖြန့်ချိရေးသက်သက်နဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေလို့တော့ မရဘူး။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးသမားဟာ ပြည်သူကို ဝါဒဖြန့်ချိလို့ ရကောင်း ရမယ်။ သို့သော်လည်း မြေပြင်မှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ သပိတ်တပ်သားတွေရဲ့ အရေးတော်ပုံတပ်သားတွေကိုတော့ ဝါဒဖြန့်ချိပြီး ဆွဲဆောင်လို့ မရဘူး။ သူတို့ဟာ အရှိတရားကို သိတယ်။ အခြေအနေမှန်ကို သိတယ်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်လို့၊ တော်လှန်ရေးအစိုးရရဲ့ အခက်အခဲတွေကို နားလည်ပေးပြီး ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ပုန်ကန်ထကြွနေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူတို့က မျှော်လင့်ပါတယ်။ တို့ရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ တပ်ဦးက ခေါင်းဆောင်တဲ့ တော်လှန်ရေးအစိုးရကို ယုံကြည်တယ်၊ ယုံကြည်သလောက်လည်း မျှော်လင့်တယ်။ နိုင်ငံရေးသမား ဟာ လေနဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ မရပါဘူး။ အခုဟာက စားပွဲဝိုင်းနိုင်ငံရေး မဟုတ်တော့ဘူး။ လက်နက်နိုင်ငံရေးဖြစ်သွားပြီ။ အတိုက်အခံဘဝကနေ အစိုးရဖြစ်လာတော့ အတိုက်အခံဗီဇ မဖြောက်နိုင်တာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အခုလည်း နိုင်ငံရေးကွင်းပြင် ကနေ လက်နက်ကွင်းပြင်ကို ရောက်ပြန်တော့လည်း နိုင်ငံရေးလို လေသေနတ် ပစ်လို့ ရတယ် ထင်နေတယ်။ လက်တွေ့ သက်သေပြနိုင်မှ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်ရင်တော့ မလွယ်ပါ။
၃။ နွေဦးတော်လှန်ရေးက ရှောင်ရမယ့် ချောက်ကမ်းပါးတွေ ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲသည့်အထဲက တစ်ချက် နှစ်ချက်ကို ပြောချင်ပါတယ်။ (၁) တော်လှန်ရေးအစိုးရအပေါ် လူထုစိတ်ပျက်သွားရင် အဲဒါ ကျရှုံးခန်း ရောက်ပြီ။ (၂) လက်နက်ကိုင်လမ်း စဉ်အပေါ် လူထုနဲ့ အရေးတော်ပုံတပ်သားတွေဟာ စိတ်ပျက်သွားရင် အဲဒါ ကျရှုံးခန်း ရောက်ပြီ။ (၃) နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် လူထုစိတ်ပျက်သွားရင် အဲဒါ ကျရှုံးခန်းရောက်ပြီ။ နံပါတ် တစ်က အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆိုင်တယ်။ နံပါတ် နှစ်က လမ်းစဉ်နဲ့ ဆိုင်တယ်။ နံပါတ်သုံးက တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့သွားပြီဆိုရင် တော့ ဘာမှ သိပ်အဖတ်ဆယ်လို့ မလွယ်တော့ပါ။ လမ်းစဉ်ကို စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့သွားရင် မဟာဗျူဟာ အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီး ဖေးမနိုင်သေးတယ်။ အဖွဲ့အစည်းကို စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့ပြီး အားမရလာရင်လည်း အဖတ်ဆယ်လို့ ရနိုင်သေးတယ်။ သို့သော် လည်း အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို လိုက်ပြီး မူတည်နိုင်ပါတယ်။ အလာ မနှောင်းပေမယ့်၊ အခါနှောင်းသွားတာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၄။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဟာ တစ်ဆစ်ချိုး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မယ့်နှစ်လို့ ပြည်သူက မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ပြည်သူမျှော်လင့်နိုင်အောင် လည်း နှစ်သစ်ကူးအစမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်​တွေ ရှိနေပြီးပြီ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘွာတေး…. လုပ်လို့ မရဘူးနော်။ အားလုံးက သတင်းမီဒီယာတွေမှာ မှတ်တမ်းအနေနဲ့ ရှိထားပြီးပြီ။ ယခင်က အာဏာရနိုင်ငံရေးသမားတွေ နိုင်ငံရေးပါးမနပ်ဘဲ စကားကို လက်လွှတ်စပယ်ပြောလို့ အခု မနည်းအဖတ်ဆယ်နေရတာ ကြည့်။ ကြမ်းကျွံရင် နှုတ်လို့ ရတယ်။ စကားကျွံရင် နှုတ်လို့ မရဘူးနော်။ ဒါကို သတိမထားမိဘဲ၊ အခုထိ လက်လွှတ်စပယ်တွေ ပြောနေတာ မြင်နေရတုန်း။ မြန်မာ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ လူမျိုးစုအဖွဲ့တွေ အတော်များများ ပါဝင်လာပေမယ့်၊ အားလုံး စုံစုံညီညီ ခြေစုံပစ် မပါဝင်နိုင်ကြသေးတာ ယခင်က သေးနုပ်သိမ်ဖျင်းတဲ့ ဉာဏ်တစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ နိုင်ငံရေးစကားကို လက်လွှတ်စပယ်ပြောခဲ့ခြင်းရဲ့ ကံကြီးထိုက်မှုတွေ လို့ မှတ်။ အခုထိ ဒါကို နားမလည်သေးရင် တော်လှန်ရေးကို လူထုစိတ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့လူတွေ စကားကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြောဆိုကြဖို့ ကောင်းပြီ။
၅။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်းမှာ စစ်ရေးရလဒ် ကြီးကြီးမားမား တစ်ဆစ်ချိုးအပြောင်းအလဲ ထွက်ဖို့ ပြည်သူက မျှော်လင့်နေတယ်။ ပြည်သူမျှော်လင့်ထက်တာ၊ သပိတ်တိုက်ပွဲဝင်တပ်သားတွေနဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေ၊ စစ်မြေပြင်မှာ အသက်စွန့်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမားတွေက ပိုလို့ မျှော်လင့်တောင့်တနေကြတယ်။ သူတို့လည်း ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ လက်ပူတိုက်ပြီး လုပ်နေတာတွေ ရှိတယ်။ သို့သော်လည်း တစ်ဖက်ကနေ တော်လှန်ရေးအစိုးရရဲ့ လက်နက်အထောက်အပံ့တွေကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်။ မျှော်သာမျှော် ရောက်မလာဆိုတာတွေ များလို့၊ တချို့လည်း အားပျက်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ကြံဆမှုတွေနဲ့ လုပ်တာ ကိုင်တာတွေကို တွေ့ရလို့ တော်သေးတယ်။ ဒါကို လည်း၊ မချီးမြှောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ထက် လူထုပုံရိပ်ပိုတက်တာကို မနာလိုဝန်တိုတာမျိုးတွေဟာ မရှိသင့် မရှိအပ်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်းမှာ တော်လှန်ရေးအစိုးရ (နာမည်တိတိကျကျ တပ်ရရင် – အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ရဲ့ လက်တွေ့ သက်သေပြချက်ဟာ ထွက်ကို ထွက်ရမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ စကားလုံးတွေနဲ့ လူထုကို ကျောသပ်ရင်သပ် မလုပ်ပါနဲ့။ လူထုဟာ မညံ့ဘူး။ လူထုဟာ မ,အ ဘူး။ တော်လှန်ရေးအစိုးရဲ့ အလုပ်မဖြစ်၊ လက်တွေ့မကျတဲ့ နိုင်ငံရေးကျောသပ်ရင်သပ် စကားတွေနဲ့ ပြည်သူကို ပျားရည်နဲ့ ဝမ်းချတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ လူထုဟာ တော်လှန်ရေးကို အပြည့် ယုံကြည်နေသေးတယ်။ အရေးတော်ပုံတပ်သားတွေဟာ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို အပြည့် ယုံကြည်နေသေးတယ်။ လက်တွေ့ မြေပြင်မှာ အသေခံ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အရေးတော်ပုံတပ်သားတွေ ကိုယ်တိုင် တော်လှန်ရေးအစိုးရကို အယုံအကြည်မဲ့သွားရင်၊ နွေဦးရဲ့ မှောင်မိုက် ခြင်းဟာ ကျရောက်လာလိမ့်မယ်။ သူတို့တတွေ စိတ်မပျက်၊ အားမလျော့စေဖို့အတွက် တော်လှန်ရေးအစိုးရဟာ ကာယကံ မြောက် သက်သေပြဖို့ လိုပြီ။
၇။ သံခင်းတမန်ခင်းမှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ လုပ်ရမှာတော့ မှန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ဟာ reality ဖြစ်တယ်။ ဒါကို မမေ့ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးအစိုးရကို နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၀) က အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံ နေစေအုံးတော့၊ ထောက်သာထောက်ခံပြီး ပြည်တွင်းက လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်မှာ ဘာအရွေ့မှ မရွှေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ ဘယ်သောအခါမှ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ် မဖြစ်နိုင်သလို၊ လက်တွေ့မှာလည်း အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ အစိုးရ လုံးဝ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။
၈။ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေ တော်လှန်ရေးအစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှု မကျဆင်းအောင်၊ လက်တွေ့ ကာယကံမြောက် သက်သေပြပါ။ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဟာ ဒီတစ်ခါတော့ တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာနဲ့လူထု ယုံကြည်အောင် ပြသပေးပါ။ နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ ဇာတ်မျောကြီး မဖြစ်စေရဘူးဆိုတာကို လက်တွေ့သက်သေပြပါ။
၉။ အတွင်းထဲက ကိုယ်တွေအချင်းချင်းကတော့ သိနေပါတယ်။ ဒီတော်လှန်ရေး ဒီနှစ်ထဲ အကင်းမပြတ်ဘူး…. ဆိုတာ။ အဲသည့် အဖြေကို ဒီ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်ကုန်မှာ၊ အတည်မပြုချင်ပါ။
၁၈၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၂။
Tagged Armed Struggle, Mass Revolution, Revolution, Revolution of Mind
Previous post ယဉ်ပါးနိုင်စွမ်း နှင့် မထိုးရသေးတဲ့ဂီယာတွေ
Next post မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာမျဉ်း (အတက် – အကျ)